Qubanaha » QM oo soo dhaweysay hishiiska Midowga Afrika iyo Burundi
QM oo soo dhaweysay hishiiska Midowga Afrika iyo Burundi
Jan 20, 2017 - jawaab
Qubanaha.net-Muqdisho-Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Dalka Soomaaliya, Meachel Keatng ayaa markii ugu horeysay waxuu ka hadlay arimaha ku aadan ka bixitaanka Ciidamada Dowladda Burundi ee Dalka Soomaaliya.
Danjiraha Qaramada Midoobay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay heshiiska dhexmaray Madaxda Ururka Midowga Afrika yo Mas’uuliyiinta Dowladda Burundi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Danjiraha waxuu hambalyo u diray Madaxa Nabada iyo Amniga ee Ururka Midowga Afrika Smail Chergui oo ku guuleystay xalinta tabashada Dowladda Burundi.
Danjire Keating ayaa soo dhaweeyay in Kumaanka Askari ee ka soo jeeda Dalka Burundi ay ku soo nagadaan Soomaaliya, maadaama buu yiri ay qeyb ka yihiin howlgalka Nabad Ilaalada AMISOM ee ka socda Dalka Soomaaliya.
Sikastaba, hadalka Danjiraha Qaramada Midoobay ayaa waxuu imaanayaa saacado un kadib markii Madaxda Midowga Afrika iyo kuwa Burundi ay ku heshiiyeen in Ciidamada Burundi aysan ka bixin howlgalka AMISOM.